आधुनिक विचार अफिसमा ठाउँ छुट्ट्याउन सजाउनुहोस्
आधुनिक विचारहरू अफिसमा ठाउँ छुट्ट्याउन
मारिया vazquez | | कार्यालयहरू
को नेत्रहीन खुला स्थान तिनीहरूले आफ्नो प्रमुखता बढाउन। तिनीहरूको माग नयाँ घरहरू र आधुनिक कार्यक्षेत्रहरूमा बढ्दैछ। कार्यालयहरू खुला योजना मनपर्दछ र दृश्यात्मक खुला छन्, ताकि सह-कार्यकर्ताहरूले एक अर्कालाई देख्न सकून्।
मा नयाँ कार्यालयहो, खाली ठाउँहरू शारीरिक सीमित छन्, तर दृश्यात्मक रूपमा होइन। तपाईं त्यो कसरी पाउनुहुन्छ? गिलासको पर्खालमा दांव, मोबाइल रेलको साथ प्रकाश संरचनाहरू वा पूरक फर्नीचर र सहायक उपकरणहरू जुन विभाजकको रूपमा काम गर्दछ। यदि तपाईं आफ्नो कार्यालयमा खाली ठाउँहरू छुट्याउन आधुनिक विकल्पहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने, हामीसँग सामेल हुनुहोस्!
1 चमकिएको भित्ताहरू
2 मेटाक्राइलेट, धातु वा काठ संरचना
ग्लाज्ड पर्खालहरू कार्यालय भवनहरूमा क्लासिक हुन्। यद्यपि यो गत दशकमा, यी भित्ताहरू लगाउन विभिन्न विकल्पहरू देखा पर्‍यो ताकि तिनीहरू «ना«्गो are नहोस्। तिनीहरूलाई रंग, vinyls प्रयोग गर्नुहोस् वा तारहरू यसको सौंदर्य परिवर्तन गर्नका लागि मात्र केहि विकल्पहरू हुन्। विकल्पहरू जसले गिलासलाई देखिने बनाउँदछ र दुर्घटनाहरू रोक्दछ।
मेटाक्राइलेट, धातु वा काठ संरचना
हामीले तल प्रस्ताव गरेको मेटाक्राइलेट, धातु वा काठ संरचनाहरू, आंशिक रूपमा हामीलाई विभाजन खडा गर्नमा समावेश भएको समय र लागत बचत गर्दछ। तिनीहरू सामान्य रूपमा हल्का संरचनाहरू हुन् छतबाट झुन्ड्याउनुहोस् र तिनीहरू आवश्यक रूपमा जमीनमा पुग्न सक्दैनन्; यसरी यो सतह खाली गर्दै। तिनीहरू शुद्ध छविमा तलको छविमा स्लेट प्यानलहरू जस्तै व्यावहारिक हुन सक्छन्।
हामी छुट्टै तखताहरु अलग workstation अलग गर्न सक्दछौं। ती कार्यालयको आपूर्ति फाइल गर्नका लागि उपयोगी हुन सक्छन् वा छैन; बिरुवाहरू राख्नुहोस् उनीहरूमा मलाई लाग्छ कि यो एक राम्रो विकल्प हो अफिसलाई प्राकृतिक र आरामदायक स्पर्श दिन, के तपाईलाई लाग्दैन?
यस प्रकारको विभाजकले हामीलाई मद्दत गर्दछ बिभिन्न स्पेस डिलीमेट गर्नुहोस् अफिसमा, तर तिनीहरू दृश्यात्मक रूपले अलग गर्दैनन्। सबै उपयुक्त स्थानको आवश्यकताको लागि उपयुक्त उपयुक्त छनौट गर्न राम्रो विश्लेषण गर्नुपर्दछ। के हामी खाली ठाउँ बीचको आवाजलाई अलग गर्न चाहन्छौं? के हामी यस बारेमा एक ठाउँ हाइलाइट गर्न चाहन्छौं?
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » स्पेसहरू » कार्यालयहरू » आधुनिक विचारहरू अफिसमा ठाउँ छुट्ट्याउन
मलाई वास्तवमा सजावट मनपर्दछ, तर म एक सजावट आपत हुँ, तपाईं मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
म तपाइँको सजावट सेवाहरू भाषा स्कूलहरूको नयाँ अवधारणाको डिजाइनमा भाडामा लिन चाहन्छु। के तपाईले मलाई मेरो विचार बुझाउनको लागी सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले कसरी हाम्रो कम्पनीमा सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ?
कार्मेल Anselmo Vázquez द्वारा भन्यो
शुभ अपरान्ह, हामी तपाईले प्रकाशित गर्नुभएको डिभाइडरहरू, रूखका काठका पानाहरूमा चासो लिन्छौं।
के हामी तपाईंलाई आवश्यक पर्ने कुराको बारेमा कुरा गर्न सक्छौ?
Carmen de Anselmo Vázquez लाई जवाफ दिनुहोस्
ट्युलिपहरूको साथ घर सजाउनुहोस्
भान्साकोठा वितरण गर्ने तरिकाहरू